Sao diso fandraisana ny atao hoe tsy mananga-tsaina? | Hevitra MPANOHARIANA
Angamba tsy mila atsangana ny saina fa ahantona tahaka ny nanantonana ny lalam-panorenana sy ny andrim-panjakana rehetra...
Rehefa teteza-mita tsisy lalam-panorenana anie izany dia tokony tsy misy saina ihany koa e.
Nampidirin'i Hery @ 16:03, 2009-06-24 [Valio]
Efa nieritreritra an'izay mihitsy koa aho saingy tsy maintsy mipetraka ihany ilay hoe "par défaut". Sady efa notadiavin'ny mpandala ny ara-dalàna rahateo ny famerenana ny fampanajana ny Lalampanorenana.
Nampidirin'i jentilisa @ 16:26, 2009-06-24 [Valio]
Ny antony hananganana saina dia satria izay no maha-malagasy...
ekena hoe tsy rariny ny fitondran'ny HAT, jiolamboto doly na ny capsat na ny HAT na ny ra8 na i deba na i Zafy sy ny karazany eee... kanefa mbola samy malagasy daholo ihany isika rehetra... ary mbola tsy nisy nanao hoe ndao zaraina i madagasikara araka ny fahafantarako azy... ka hoy aho hoe tsy tokony afangaro @ resaka politika ny maha-malagasy...
Marihiko eto fa tsy manohana ny HAT ah na kely balitika aza fa tsy mety fotsiny ny hanaovana fin politika ny zavatra saro-bidy ary maha malagasy antsika...
mariky ny firaisan-kina antsika koa io ee. Azo ovaina ny loko fa ny hoe malagasy dia iray ihany dia izay le izy eee...
otran'ny hoe satria misy an'zao sy izao ataon'ny HAT sy ny foza dia andao tsy hiteny gasy intsony...
Raha misy ny olana dia tokony vahaina avy ao anatiny fa tsy hoe ndao hamorina zavatra vaovao indray...
tsy mety amiko aloha ee :)
Nampidirin'i simp @ 17:47, 2009-06-24 [Valio]
Ny tiako tenenina dia hoe "identite nationale" fa tsy haiko loatra ny tena dikany ee...
otran'ny hoe tsy tokony ampiasa ariary intsony ve izany isika satria jiolamboto ny HAT?
esorina aloha ny anarana hoe Madagasikara mandritra ny HAT eo @ fitondrana??
otran'zay le hevitra
Nampidirin'i simp @ 17:56, 2009-06-24 [Valio]
Ilay saina amiko zany dia milaza hoe iza no firenena niaviako e. Tsy isan'andro aho no manangana azy noho izaho olon-tsotra (tsy any @ birao, tsy toby miaramila, tsy autorité) ka raha amin'ny fankalazana ny andro nahazoana ny fahaleovantena no fotoana azoko anehoana fa io ny sainan'ny fireneko dia ataoko, satria raha milanjalanaja io aho aty lavitra aty dia tonga dia fantatry ny olona fa malagasy aho.
Marina fa mikorontana ny tanindrazako, toa ireo tany hafa maneran-tany mikorontana, fa izany tsy midika fa tsy afaka mampiseho aho fa Malagasy mampiseho ny sainako. Na inona zavatra mitranga any na inona, mbola tsisy filazana amin'ny fomba ofisialy manerana izao tontolo izao fa eo ambany ziogan'ny firenena iray i Madagasikara, fa mbola Firenena mijoro ary nahazo fahaleovantena tamin'ny 26 jiona 1960 izy. Misy korontana ao, fomban-tany izany, tsy laviko saingy mbola mihofahofa aty ivelany aty ny saina fotsy-mena-maitso araka ny lesona azo, izay milaza fa Madagasikara dia firenena mizaka tena fa tsy département d'outre mer frantsay na territoire americain. Mbola misy mitolona hampilamina ny disadisa ao amin'ny taniko ka tsy kivy aho mampiseho amin'izao tontolo izao fa tamin'ny 26 jiona 1960 izahay dia nahazo fahaleovantena, ary nisy nitolona toa anareo amin'izao fotoana izao t izany fotoana izany ka nahazoana ny fahaleovantena, ka rariny raha tsaroana izany amin'ny andro iray fa tsy hoe maty momoka any ny tolona nataon'izy ireo fa mbola miady an-trano isika ankehitriny. Sady mitolona no manandratra satria tsy ny disadisa ao anatiny ao no miseho raha manangantsaina aho fa ny maha-firenena sady fireneko an'i Madagasikara.
Raha ny filaharan'ny loko indray no manahirana an'i jentilisa dia marina io lazaina io hoe mandeha ho azy ny vava. Saingy hatrizay raha nihirahira ny zaza hoe "maitso fotsy mena sainam-pirenena" dia tsy mba nisy nanitsy satria tsy nisy gidragidra teo amin'ny firenena, saingy fe ankehitriny ve misy tsy fitiavana frantsay dia manjary voatsikera h@ maitso fotsy mena maka tahaka ny bleu blanc rouge -ndrizareo ? Nefa mino aho fa raha manonona ny sainantsika amin'ny teny frantsay isika dia mavesatra kokoa ny miteny hoe le vert blanc rouge malgache. Noho izany tsy hoe noho isika zanatany no nahazatra ilay maitso fotsy mena fa noho ny rima nahazatra fony kely nanao poezia hoe maitso fotsy mena sainam-pirenena nefa tsy mba nisy nanitsy. Dia mbola eo indray ilay education civique.
Hevitro manokana aloha izay raha nanomboka ity resaka fananganan-tsaina ity e. Tsoriko fa raha tsy nigidragidra ianareo mety tsy nandinika izany rehetra izany aho, ary rehefa nofakafakaiko dia tapaka ny hevitro fa rariny raha asehoko amin'izao tontolo izao eto amin'ny aterineto (fa eto moa sisa azoko hampisehoana izany) fa Malagasy aho manana saina fotsy-mena-maitso satria mbola tsisy nilaza fa tsy mahaleo tena intsony i Madagasikara. Ny tolona ataonareo dia milaza amiko fa mbola mahaleo tena Madagasikara na dia misy aza ny mitsiriritra ny hanao azy eo ambany elany.
Mahaleova mahalasana daholo e ! Ho tratry ny asaramanitra jiaby jiaby !
Nampidirin'i ikalamako @ 19:00, 2009-06-24 [Valio]
Eny, tsy eny an-toerana izahay ka tsy mahatsapa tsara ilay zava-miseho lazainao, fanavahana ny lhl rehefa sy ny foloalindahy ! Nefa aza kivy fa betsaka ny adala eto an-tany.
Ary tsy hoe politika ihany no azo ananganana saina fa ny mahafirenena iray manontolo ny tany iray. Fantatra fa ny dikan’ny fahaleovantena dia “tsy maikin-doha amin’ny firenena iray”. Tsy noho ny olom-bitsy izay nisolelaka t@ Frantsa akory no hanariako izany fahaleovantena efa izany, ary raha manaiky izany dia resiny tokoa izay ! Koa dia atsangana ary ilay saina noho izany. Mifangaro be loatra ao anatinao ny politika miseho ankehitriny sy ny fankatoavana ny fahaleovantena izay azo noho ny tolona namoizan’aina nataon’ny razana izay azo lazaina fa manan-danja lavitra noho izao tolona misy ankehitriny izao.
Tsy raha vao misy manao maloto amin’ny firenena, dia hoe izay no vita fa tsy izy intsony io, ka noho izany tsy azo ovaina isaky ny feeling ny lokon’ny sainam-pirenena akory, tsy kilalao izy ity ! Tsy fahazarana noho izany ny manaiky ny lokon’ny saina fa efa izay no zavatra nipetraka h@ izay nahazoana fahaleovantena. Tsy vao maika ary ho tantara be tsy ho lanin’ireo mpitolona raha ovaina lokon’io ? Ny mikasika ny fanononana ireo loko, tsy itako izay olana fa hevitrao manirery iny, loko io ary tsy maintsy tononina : avy ambony midina ambany toy ny mamaky boky !!! Nefa raha izay no tianao hanononana azy dia tsy olana mihitsy misy fa tsy hanova na oviana na oviana ny sainam-pirenena Malagasy izany, tsy hampifangaro azy amin’ny hafa na oviana na oviana.
Farany, vehivavy aho ary aty ivelany, fa tsy mahita izay zava-miseho aty Madagasikara mivantana. Nefa dia atsangako ny saina, izany hoe tsy miankina amin’ny zava-misy aty no anaovako izany. Satria tanindrazanay Malagasy i Madagasikara, ka tiako sy lalaiko …. Mananganangam-poana ve izany aminao ? Anao ny mamaly azy.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:00, 2009-06-24 [Valio]
Misy ahitsiko kely ny voateniko momba ilay fanononana loko satria itako fa ambany no miakatra ilay izy (maitso, fotsy, mena). Tsy maninona izany fa "lecture verticale" no iantsoana izany, fa araka ny voalazako dia tsy manova inon'inona izany ry ilay koto a !
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:07, 2009-06-24 [Valio]
Capsat eto France : RaDavy sy RaChris no nanafika Ambassade
Envoyé par: wen (Adresse IP journalisée)
Date: mer 24 juin 2009 21:58:45
Davy batteur-ni Rossy izay batteur-ny macadence'car sy
Christian na (Rachris) miasa @ sécurité
no tonga nanafika ny ambassade sy ny GTT izay niaro tao.
Nanao cangoule rizalahy ary nitondra alika roa sy nampiasa gaz lacrymogène.
I Davy no chef de commandos ary Christian no second-ny.
@ Asabotsy 27 Juin hanao fête aà Savigny le temple Davy miaraka @ macadence'car
Izy roa lahy no nitarika ilay commandos nanafika ny GTT tao amin'ny ambassade. Naratra ny GTT iray voadarako tao amin'ny lohany ary naratra ny tanany.
Misy valiny ny zavatra rehetra. Ary misy ny andro tsy maintsy hizakana ny vokany zavatra atao.
Hifankahita isika @ le 27 Juin. Tongava any fa hi-regler ny compte isika ry Davy
Nampidirin'i Guest @ 23:25, 2009-06-24 [Valio]
Isaorana indrindra ny fametrahanareo rehetra hevitra, tsy dia noraharahiako loatra ny namoaka ny lahatsoratro raha tsy eo ny fahasamihafan-kevitra eo amintsika rehetra. Tiako asongadina amin'ny adihevitra tokoa ny hoe inona ny dika sy ny lanjan'ny sainam-pirenena eo amintsika tsirairay. Fampieritreretana antsika rehetra koa izany.
Eo amin'ny resaka fampandaharana io loko io dia efa hatramin'ny ela no tao amiko io fanazavana io fa ny an-tserasera angaha no tsy tafavoaka dia tahaka ny hoe raikitra ity ny sakoroka vao mahita hokianina amin'ny zava-drehetra. Eo amin'ny hevitra indray! Amin'izao fotoana izao dia ny loko fotsy mena maitso no ahafantarana ny Malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aseho amin'ny alalan'ny saina. Asa raha efa hitanareo fa rehefa amin'nyfetim-panjakana ireny ihany koa dia misy ilay saina atao lavabe iny dia ny loko fotsy no ambony indrindra dia manaraka ny mena ary ny maitso no ambany indrindra. Mbola tsy naka sary ireny loatra aho ka izay nombola tsy mampivoaka azy aloha!
Tsy hoe tsy mananga-tsaina satria mikorontana ny firenena na manjaka ny jiolahimboto. Tsia velively, tsy antony mihitsy izany! izany aza no tokony ideraderana sy anofahofana azy! Fa tsy manangana an-trano fotsiny izao aho satria miato amin'izao fotoana izao ny lalàna mametraka ny sainam-pirenena ho fotsy mena maitso tamin'ny nampiatoana ny Lalampanorenana. Rehefa miato ny lalàna mamaritra azy dia mbola misy heviny ve ny fanangana-tsaina? Ny lalàna no ifotorako eto fa tsy ny hoe mahamalagasy ary eto Madagasikara aho fa tsy any Finda, samihafa koa manko izay toerana izay ka mametraka ny hevitra ho samihafa.
Momba ny hevitr'io saina io indray, ny loko fotsy mena no sainan'ny fanjakana merina (tsy soratako hoe fanjakana malagasy satria maro ny fanjakana samy nahaleo tena teto talohan'ny fanjanahantany) saingy tamin'izany fotoana izany dia teo amin'ny loko maitso farany teo no nitoeran'ny loko fotsy tamin'izany fotoana izany. Natsimbadika ho lasa ambony ilay loko mena avy eo (navadika na nampifamoterana ny lokontsaina) ary nasolo azy ny loko maitso natao ho lokon'ny amorontsiraka rehetra. Ny loko fotsy maneho ny lokon'ny vahoaka ambaniandro niakanjo fotsy nahatonga ny teny hoe nangoro-potsy ary ny loko mena kosa ny lokon'ny andriamanjaka.
Averiko farany izany, tsy resaka politika velively araka ny iheveranareo azy ny tsy ananganana ilay saina mandra-pisian'ny lalampanorenana mamaritra indray ny lokontsaina malagasy fa tena resaka lalàna, ary ny fampanajana lalàna no tena mametraka ny fiandrianam-pirenena. Raha ny marina izany dia izay nampiato io lalàna io indrindra no tokony tsy hanangana sy hampanangana ny sainam-pirenena fa dia faly manentana fotsiny ry zareo. Avereno ny fampiharana ny lalàna mametraka ny lokontsaina dia tsy manana antony izahay handavana ny fananganana azy amin'ny trano (eto Madagasikara).
Nampidirin'i jentilisa @ 05:45, 2009-06-25 [Valio]
...saingy tamin'izany fotoana izany dia teo amin'ny loko maitso farany teo no nitoeran'ny loko fotsy tamin'izany fotoana izany. misy diso: vakio hoe nitoeran'ny loko mena tamin'izany fotoana izany.
Nampidirin'i jentilisa @ 06:14, 2009-06-25 [Valio]
ka azon'i jentilisa raisina ho hadisoanao izany ny nahalala izay fandaharana loko izay nef tsy mba nozarainao fa aza atao ao andamosin'ny fanjanahantany foana kosa e. Aiza ka rehefa mety ve ny ataontsika dia mirehareha isika fa raha vao misy diso kely dia mety ho takaitran' ny fanjanahantany daholo kosa !
Nampidirin'i ikalamako @ 17:46, 2009-06-25 [Valio]
nosamborina ny depiote iray
Manomboka tsara ity fetim-pirenena ity. Nosamborina ny depiote Yves Aimé rehefa nirava kelikely ny fivoriana teny amin'ny Auditorium Ankorondrano Antananarivo androany 25 jona 2009. Efa andrasana rahateo ny fisamborana ny mpiasan'ny tiko rehetra ary rehefa afaka fotoana kelikely dia izay efa nihinana vokatra tiko rehetra (lol).
Nampidirin'i jentilisa @ 18:23, 2009-06-25 [Valio]
sainam-pirenena ahoana ary
Diso daholo tsy mahalala tantara nareo mianakavy. Ny tena sainam-pirenena malagasy dia mena misy sary voromahery. Ary efa naleo tena isika t@ andron'ny radama I. Io sain hatsangana io dia sainam-pirenena neocolonialisme ka tokony hovana.Tsy mariky ny fahaleovan-tena izany io. Asa na mazava @ maro izay.
Vendrana minakavy ny gasy e, mora hampihesonina e.Mianara tantara fa nandra loatra. Bandy kely 34 ans ve dia afaka mapiesona ny gasy, tsy gaga aho raha mihembotra ity firenena.
Nampidirin'i ndry e @ 19:25, 2009-06-25 [Valio]
Kabarin’i Prezida Ravalomanana
Nampidirin'i Solo @ 21:05, 2009-06-25 [Valio]
Mitohy ny fety! mahafinaritra tokoa! nosavaina ny tranon'ny talen'ny radio fahazavana omaly ka na dia tsy nahitana porofo mety hampiahiahy aza dia nentina hatao takalon'aina ny vadiny satria tsy tao a-trano ralehilahy. Nanjaona vetivety avokoa ny mpitari-tolona toa ny depiote Zafilahy sy ny depiote Rasomotra ary ny mpanentana tao amin'ny Auditorium, saingy tsy voatery hoe nosamborina ireo an! Tsaroana eto indray ny nisamborana ny zanaky ny ambasadera tany Alzeria rehefa tsy tratra tao an-tano ny rainy. Mba tia miodina tsy mpody an-trano koa ireto mpitari-tolona ireto an! Tsaroana ihany koa ny nitifirana ny mpitolona tamin'ny 28 marsa 2009. Tian'ny herim-pamoretana koa ny manao action andro iray mialoha ny fety an!
Nampidirin'i jentilisa @ 04:22, 2009-06-26 [Valio]
mba airato ny saina e
Vendrana hoa ny gasy e! Izay sisa no azo lazaina! Dia tsy mety tonga saina foana hoa,dia manaiky zanahan'ny frantsay ihany.Eo dia misy mirediredy hoe hananga-tsaina hono. Saina tsy antsika io, fa nomen'ny mpanjanaka frantsay.Tsy mahaleo tena izany i gasikara, fa mbola ny frantsay no mitondra ny baolina.I Andry tgv sy ny forongony no marionette ny. Moa va tsy ny tantara teo aloha ihany no miverina.Misambotra olona tena tia tanindrazana.Fihatsarambela-tsia fotsiny izany mankalaza fety 26 juin izany.Izahay tsy hifety,fa kosa mivavaka ho an'ireo namoy ny aina ho an'ny tanindrazana hatramin'ny izay naha madagasikara an'i madagasikara.
Misaotra tompoko namaky.
Nampidirin'i zà ihany @ 08:31, 2009-06-26 [Valio]
Ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tsaroako nampalahelo indrindra teo @ fiainako dia ity sy izay tany aloha tsy nankalazaina tao @ fianakaviana fa nisy fisaonana. Miombom - bavaka @ ireo Malagasy maniry ny hiverenan'ny fandriampahalemana ary mahatsiaro manokana ireo namohy ny ainy ho an'i tanindrazana hatramin'izay.Enga anie mba ho latsadatsa-poana ny ran'izy ireny.Maniry ho avy hitsirin'ny fanantenana indray ho an'ny taranaka izay tena natao sorona ... feno ny fo ka hijanona @ zay Mahereza daholo Zaho tsy manana zotom-po hanangan-tsaina sy hifety izany aloha fa aza omena tsiny
Nampidirin'i Gasy aho @ 10:18, 2009-06-26 [Valio]
Enga anie mba TSY ho latsadatsa-poana ny ran'ireo rehetra maty ho an'ny tanindrazana
Nampidirin'i Gasy aho @ 10:22, 2009-06-26 [Valio]
fahaleovan-tena hoe e
Fahaleovan-tenan'ny foloalin-dahy malagasy hono, nefa na ny basy eny antanany aza dia novidiana any @ vazà frantsay.Dia izany ve no lazaina fa mahaleo tena. Aza hampiresahina izahay e. Basy hamonona vahoka no entiny, fa tsy hiarovana ny vahoka.Tsy misy intsony izany foloalin-dahy izany aminay malagasy.
Nampidirin'i fanano @ 12:37, 2009-06-26 [Valio]